Posted by YKKM at 8:25 PM No comments:
Posted by YKKM at 9:56 PM No comments:
ဖုန်း​ဘေမရှိတဲ့ Data SIM Card ကို အင်​တာနက်​ Free အသုံးပြုနိုင်​တဲ့ YOUR FREEDOM.apk
By Myo Thet3:05:00 pm14 comments
Internet connection ကို Free သုံးလို့ရတဲ့ Your Freedom.apk ​လေးပါ။ ကျ​နော့်​မှာရှိ​နေတာကြာပါပြီ။ မစမ်းဖြစ်​တာကတ​ကြောင်း မအားတာကတ​ကြောင်း ဒီ apk ​လေးရဲ့အ​ကြောင်းကိုမသိခဲ့တာပါ။ ခု​တော့ အကြံကုန်​ ဂဠုန်​ဆားချက်​ဆိုတဲ့အတိုင်း ဖုန်း​ဘေမရှိ​တော့တာနဲ့ ဒီ apk ​လေးစတင်​အသုံးပြုလိုက်​တာ ခုမှ​ကောင်းမှန်​သိ​တော့တယ်​ဗျာ။ တကယ်​ကိုအသုံးဝင်​ပါတယ်​။ ကျ​နော်​ ဒီpost နှင့် ဒီ​apk upload တင်​တာကို Your Freedom သုံးပြီးတင်​ထားတာပါ။ download/upload အကုန်​လုပ်​လို့ရပါတယ်​။ ကျ​နော့်​ SIM Card ထဲမှာ ပိုက်​ဆံတစ်​ပြားမှထည့်​မထားပါဘူး။0kyats ပါ။ Ooredoo data card နဲ့သုံးပါတယ်​။ ယုံတမ်းစကား​ပြောတာလည်းမဟုတ်​ပါဘူး။ ကျ​နော်​တို့သူငယ်​ချင်းတ​တွေက​တော့ free သုံး​နေကြပါပြီ။ ခုဒီ post ကိုဖတ်​ပြီး သုံးလို့အဆင်​​ပြေသွားတဲ့သူ​တွေက​တော့ယုံကြမှာပါ။ သုံးလို့အဆင်​မ​ပြေ​သေးတဲ့သူများက​တော့ ဆက်​ပြီးကြိုးစားကြည့်​ကြပါ။ ဒီ Apk ကို​ရေးထားတဲ့ဆရာကြီးကို ဂုဏ်​ယူပြီး​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​။ ပြီး​တော့ ကျ​နော့်​သူငယ်​ချင်း ya kout ကိုလဲ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​။ သူ့​ကြောင့်​ ဒီ post ကို ​ရေးပြီး အားလုံးကို ပြန်​လည်​မျှ​ဝေ​ပေးဖြစ်​သွားတာပါ။ သိပြီးသားသူများက​တော့​ကျော်​သွားပါ။ မသိ​သေးတဲ့သူများ​က​တော့ ဒီpost ကို ​​သေချာဖတ်​ပြီး လုပ်​ကြည့်​ကြပါ။ အသုံးပြုနည်းများကို ​အောက်​မှာပုံနှင့်​တကွ ရှင်းပြ​ပေးထားပါတယ်​။ Apk ကိုလည်း download လုပ်​ယူနိုင်​ပါတယ်​။
Your Freedom.apk DOWNLOAD ရယူရန်​...
>> Apk ကို Download ယူပြီး Install လုပ်​လိုက်​ပါ။ ပြီးရင်​ ဖွင့်​လိုက်​ပါ။ ​ငွေလုံးဝမရှိတဲ့ data card မှ internet ကိုဖွင့်ထားပါ။​​​ အောက်​မှာပြထားတဲ့ပုံအတိုင်း​ပေါ်လာရင်​ configure ကိုနှိပ်​လိုက်​ပါ။
>> ပြီးရင်​ General settings >>> language,( system default ) ​နေရာမှာ Burmese လို့သတ်​မှတ်​​ပေးလိုက်​ပါ။
>> ပြီးရင်​ apkကို back key နဲ့အားလုံးပြန်​ထွက်​ပြီး ပြန်​ဝင်​လိုက်​ပါ။ ​အောက်​ကပုံအတိုင်း မြန်​မာ language နဲ့မြင်​​တွေ့ရမှာဖြစ်​ပါတယ်​။ (ပြင်​ဆင်​မှုပြုလုပ်​ရန်​) ကိုနှိပ်​ပါ။
>> (ဖရီးဒမ်းအ​ကြောင်း) သို့ဝင်​ပါ။
>> တက်​လာတဲ့ list ကိုအ​ပေါ်သို့တွန်းလိုက်​ပါ။ >>> (မသိပါကတဆင့်​ချင်းဆီလုပ်​ရန်​) ကိုနှိပ်​ပါ။
>> (ကြိုဆိုပါတယ်​) လို့ပြလာရင်​ အ​ပေါ်က မြှား​လေးကိုနှိပ်​ပြီး ​ရှေ့ကိုပြထားသည့်​မြှားကုန်​တဲ့အထိဆက်​သွားပါ။
>> (ဖရီဒမ်းဆာဗာများရှာ​ဖွေခြင်း) များအလုပ်​လုပ်​​နေပါလိမ့်​မယ်​။ ​စောင့်​​ပေးပါ။ ​
>> (ရှာ​တွေ့​သောဖရီးဒမ်​ဆာများ) တက်​လာတဲ့အထဲမှ လိုင်းအ​ကောင်းဆုံး ကို​ရွေး​ပေးပြီး အ​ပေါ်ကမြှား​လေးနဲ့ဆက်​သွားပါ။
>> (ဂုဏ်​ယူပါသည်​) လို့​ပေါ်လာခဲ့ရင်​ အမှန်​ခြစ်​​လေးကိုနှိပ်​လိုက်​ပြီး home key နဲ့ထွက်​လိုက်​ပါ။
>> noti bar ​ပေါ်မှာတက်​​နေတဲ့ ပိတ်​​နေတဲ့တံခါး​လေးကိုဆွဲချပြီး ဖွင့်​လိုက်​ပါ။>>> ပြီးရင်​ (စတင်​ဆက်​သွယ်​ရန်​) ကိုနှိပ်​ပြီး​စောင့်​​နေပါ။
>> noti bar ​ပေါ်မှာ ​​အောက်​မှာပြထားသည့်​အတိုင်း သော့ပုံ​လေးတက်​လာပြီး တံခါး​လေးပွင့်​သွားရင်​ အင်​တာနက်​ကို စတင်​အသုံးပြုနိုင်​ပါပြီ...
မှတ်​ချက်​။ ။ ကျ​နော်​တခုစိတ်​ပူမိလို့ပါ.... ကျ​နော့်​အ​တွေး​ပေါ့..... ဟုတ်​ချင်​မှလဲဟုတ်​မှာပါ။ ဒီ apk ကိုအသုံးပြုတာဟာ internet location ကတခြားနိုင်​ငံ​တွေမှာ​ရောက်​သွားတဲ့အတွက်​​ကြောင့်​ Facebook အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ Facebook lock ကျသွားခဲ့မယ်ဆို​ရင်​ ကျ​နော်​ကိုအပြစ်​မတင်​ပါကြပါနဲ့။ facebook account ​တွေဟာ vpn ​ကျော်​လိုက်​ရင်​ lock ကျတက်​ပါတယ်​....
Posted by YKKM at 9:39 PM No comments:
အတိုးနှုန်း နှင့် စီးပွား ၀င်ငွေ တွက်ချက်နည်း အကြောင်း သိကောင်းစရာ ...
စီးပွါးရေသမား များ အလုပ် လုပ်ရာ တွင် မိမိ လုပ်သော လုပ်ငန်း ဘယ်လောက် အတိုး ကိုက်သလဲ ဆိုတာ ကို ပေသီး ပြန်ခေါက်ကြပါ တယ်။
ဥပမာ ၃ ကျပ် တိုးလား? ၅ ကျပ် တိုးလာ? ၁၀ကျပ် တိုးလား? သူများ ဆီ မှ ငွေ မချေးပဲ ကိုယ့် ပိုက်ဆံနှင့် ကိုယ် လုပ်သော်လည်း မိမိ လုပ်ငန်း အတိုး ဘယ်လောက် ကိုက်လဲဆိုတာ လချုပ် နှစ်ချုပ် တွက်ကြပေသည်။ တွက်ဘို့လဲ လိုပါသည် ။ ဒါမှလဲ မိမိ လုပ်ငန်း တိုးတက်မူ့ဆုတ်ယုတ်မူ့ သိနိုင်ပါသည်။
တစ်ချို့ စနစ် မကျသော လုပ်ငန်းရှင်များ က ok ok နဲ့ အချိန် တန်သော် မ ok ဘဲ ပြုတ်သွားပါတော့သည်။ ဘာဖြစ်လို လဲ ဆိုတော့ စနစ်တကျ တစ်လ တစ်ခါ တနှစ် တစ်ခါ စာရင်း မချုပ်လို့ပါ။ စာရင်းပြန်ချုပ်ခြင်း အားဖြင့် အရူံး အမြတ် ကို ဦးစွာ သိရပါလိမ်မည်။
ok မြတ်ပါ တယ်။ နောက် တစ်ဆင့် ဘယ် အတိုးနဲ့ ကိုက်ပါသလဲ? ၂၀ တိုးလောက် ကိုက်ရင် ok ပါတယ်။ ၃ကျပ် တိုး ကိုက်ရင် သိပ်မကောင်းဘူးပေါ့။ ကိုယ်ငွေလို လို့ လှယ်ရင် ရွှေ အပေါင်လေးပေး မှ ၃ကျပ် တိုးနဲ့ ဆွဲလို့ ရမှာကိုး ဒီတော့ ၃ကျပ်တိုး နဲ့ ကိုက်ရင် အရင်း ပဲ အပေါင်ဆိုင် ကို လုပ်ကျွေး လိုက်တာပဲလို့သတ်မှတ် ပါတယ်။
အခု နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဘဏ်တိုး (ဘဏ်ငွေ အပ်ထားရင် ဘဏ် ကပေးသော အတိုးနှုန်း) တောင် သိပ် မကိုက်ခြင်ဘူး ဟု ငြီးတဲ့သူများပါသည်။ တစ်ကယ်လဲ အဲ့ဒီလို ဖြစ်နေကြပါသည်။
မြေကွက် ရောင်းဝယ် လုပ်နေသူ ရဲ့စကား....
သူ ဟိုတစ် လောက နေရာ တစ်ခု မှာ ၈၀×၈၀ မြေကွက် တစ်ကွက် ကို ၂၄၀၀ သိန်း နဲ့ ဝယ်လိုက် ပါတယ်။ အခုခြောက်လ လောက်ကြာ တော့ သိန်း၂၅၅၀ လာပေးပါတယ်။ ကျွန်တော် က " မင်းထောပြီ " ဆိုတော့ "ဘယ် ကထောရမှာတုန်း ရူံးနေတာ" " ဟေ" ဆိုတော့ သူက စိတ်ရှည် လက်ရှည် တွက်ပြပါတယ်။
သူ့မိတ်ဆွေ ဆီမှာ ထားရင် ၁ ကျပ် ၂၅ပြား အတိုး ရကြောင်း သိန်း၂၄၀၀ ကို ခြောက်လ ထားရင် အတိုးရပုံ တွက်ပြပါတယ်။
ပထမလ သိန်း ၂၄၀၀ မှာ ရရှိသော အတိုး သိန်း ၃၀ ရပါတယ်။
ဒုတိယလ သိန်း ၂၄၃၀ မှာ အတိုး သိန်း ၃၀.၃၇ ရပါတယ် ။
တတိယလ သိန်း ၂၄၆၀.၃၇ မှာ အတိုး သိန်း ၃၀.၇၅ ။
စတုထ္တလ သိန်း ၂၄၉၁.၁၂ အတိုး သိန်း ၃၁.၁၃ ။
ပဉ္စမလ သိန်း ၂၅၂၁.၂၅ အတိုး သိန်း ၃၁.၅၁ ။
ဆဋ္ဌမလ သိန်း ၂၅၅၁.၇၆ အတိုး သိန်း ၃၁.၈၉ ။
ခြောက်လ အပ်ပြီး ရရှိမဲ့ တိုးရင်းပေါင်း သိန်း ၂၅၈၃.၆၅ ဖြစ်ပါတယ်။
"အဲ့ဒီတော့ လက်ရှိ ရတဲ့ဈေးက ၃၃ သိန်းလောက် ရူံးနေကြောင်း ဒါတောင် အတိုးနှုန်း ကို ၁ကျပ် ၂၅ပြား နှုန်း နဲ့သာ တွက် ထားကြောင်း တစ်ကယ် လို့ အပြင်မှာ ၃ကျပ် တိုး နဲ့ ယူပြီး ဝယ်ထားတာ ဆိုရင် အရူံး ပြနေပြီ ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြတော့ နားထောင်ရင်း ကျွန်တော် တစ်ကိုယ် လုံး ချွေးတွေ ပြန် လာလို့ သူငယ်ချင်း က တစ်ရူးပေပါ ဆွဲထုတ်ပေး ပြီး " ဟာ မင်း ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ချွေးတွေ အရမ်းထွက်နေပါလား?
သူနဲ့ လမ်းခွဲပြီး အတိုးနှုန်း ရဲ့ လုပ်ငန်းပေါ် အကျိုး သက်ရောက်မူ့ ကို စဉ်းစားရင် ချွေးတွေ ထပ် ထွက်လာပါ တယ်။ လက်လီဆိုင် များ နဲ့ အတိုးနှုန်း ဆိုင်ခန်း တစ်ခန်း ကို တစ်လ ၆သိန်း နဲ့ သိန်း၂၀၀ ရင်းပြီး လက်လီ ဆိုင် ဖွင့်တယ် ဆိုကြပါစို့။
ရောင်းကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း တစ်နေ့ ပုံမှန် ထွက် မဲ့ စားရိတ် တွက်ကြည့် ရအောင် .........
1) မိတ်ဆွေ လုပ်အားခ ကို ၈၀၀၀ သတ်မှတ်ကြစို့
2) အလုပ်သမား နှစ်ယောက် နေ့စားခ 5000×2= 10000ကျပ်
3) ရေဘိုး မီးဘိုး တစ်ရက် 3000 ဘဲ ထားကြစို့
4) ထမင်းဟင်း စားရိတ် 12000 ဘဲ ထားကြစို့
5)ဆိုင်ခန်း ဌားခ တစ်ရက် 20000
6) အရင်း သိန် 200 ကို3ကျပ် တိုး နဲ့တစ်ရက်ပေးရမဲ့အတိုး 20000
7) စည်ပင် အမိူက်ခွန် 1000
သာရေး နာရေး ကျန်းမာရေး ပညာရေး စားရိတ်များ ထည့် မတွက်တော့ပါဘူး။
မိမိရောင်းတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းများ အလေ အလွင့် ထည့် မတွက်တော့ပါဘူး။
ဒီ စားရိတ်တွေ က တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကုန်ကျစားရိတ် မတူနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့် ဟာကိုယ် ထည့်ပေါင်းကြပါ။
အဲ့ဒီတော့ တစ်နေ့ရောင်းကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း မိတ်ဆွေ ရဲ့ ထွက်ငွေ က 74000 ကျပ် ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ မိတ်ဆွေ အရောင်း အဝယ် လုပ် လို့ အမြတ်ငွေ 50000 ဆိုရင် မိတ်ဆွေ 24000 အနှုတ်ပြ သွားပါပြီ။
အရောင်း အဝယ် က ဒီနေ့ ကောင်း တယ် မနက်ဖြန် မကောင်းဘူး ဆိုတဲ့သဘော ရှိပါတယ်။ ဒီတော့ လချုပ် နဲ့ပြန်ဖမ်း ရပါတယ်။ ရက် 30 ပဲ သတ်မှတ် ကြစို့။
တစ်လ မိတ် ဆွေရဲ့ သေချာ တဲ့ ထွက်ငွေ က 2220000 ကျပ်ပါ။ မိတ်ဆွေ ရဲ့ အမြတ်က သိန်း 40 ဆိုရင် ဒီလ 17.8 မြတ် ပါတယ်။ သာရေး နာရေး ပညာရေး ကျန်းမာရေး မော်တော်ကား ဆီဘိုး နုတ်လိုက်ရင် ရူံးတောင်
တစ်ချို့ လက်လီဆိုင် များ က ပစ္စည်းဈေး ကို % အသေ တင် ရောင်းတဲ့ သူတွေ အတွက် ဖော်မြူလာ ချကြည့် ရအောင်..........
ဆိုပါစို့ မိတ်ဆွေက ပစ္စည်း အားလုံး ကို 10% တင်ထားတယ်ပေါ့။ မိတ်ဆွေ ထွက်ငွေ ကာဘာဖြစ်ဘို့ မိတ်ဆွေရောင်းရငွေ ဟာ အနဲဆုံး တစ်သိန်း ကို တစ်သောင်းမြတ်တော့ အနဲဆုံး ရောင်ရငွေ က 780000 ဘိုးရှိမှ မိတ်ဆွေ အရင်းရမှာ ဆို တဲ့ အသိလေး ထည့်ထား လိုက်ရုံပါပဲ။ ရှင်းပါတယ်နော်။
ရွှေ ဝယ်ရောင်း နဲ့ပတ်သက် လို့ပြောကြည့်ရအောင်........
ဆိုကြပါစို့ မိတ်ဆွေ သိန်း210 ရင်းပြီး ရွှေသုံး တုံ ဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာ။ ရွှေဈေးက တစ်တုံးကို သိန်း70ပေါ့ ။
ရွှေ ကစားရင် ရွှေ နဲ့ပဲ အရင်း သတ်မှတ်တာ အရှင်းဆုံး နဲ့ အမှန်ဆုံးပါ။ တစ်ချို့လဲ ယာယီ ဝင်ကစားသူက အရင်း ကို မြန်မာကျပ် သော်လည်း ကောင်း ဒေါ်လာ နဲ့သော်လည်းကောင်း သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
1) ရွှေ နဲ့ သတ်မှတ်ရင် ရွှေ3တုံး
2) မြန်မာငွေ နဲ့ သတ်မှတ်ရင် ကျပ် သိန်း 210
3) ဒေါ်လာ နဲ့သတ်မှတ်ရင် 1200 ပဲ သတ်မှတ်ကြစို့
ဒေါ်လာ $ 17500
ဒီရွှေ သုံးတုံး ကို အရင်းပြုပြီး အရောင်း အဝယ် လုပ်ရာ တစ်လပြည့် တဲ့ အချိန် မှာ ရွှေဈေး က 780000 ဈေးဖြစ်ပြီး ဒေါ်လာ ဈေး က ၁၂၃၀ ဖြစ်နေသည် ဆိုကြပါစို့ ၊
1) မိတ်ဆွေ လက်ထဲမှာ ရွှေ သုံးတုံး နဲ့ အမြတ်ငွေ ကျပ်5သိန်း ဆိုရင် မိတ်ဆွေ သေချာတဲ့ ၅ သိန်း မြတ် သွားပါပြီ။
2) မိတ်ဆွေ လက်ထဲ မှာ ကျပ် 225 သိန်း ငွေသားချည်းပဲ ကျန်တယ် ဆိုရင် မိတ်ဆွေ ငွေသား 15 သိန်း အမြတ်ပြသော် လည်း ရွှေ နဲ့ တွက်ရင် ကျပ် 14 သိန်း အရူံး ပေါ်သွားပါပြီ။
3) မိတ်ဆွေ လက်ထဲမှာ ဒေါ်လာ $ 18200 ကျန်ခဲ့ရင် ဒေါ်လာ အနေနဲ့ ပြောရင် 700 မြတ်သော်လည်း ရွှေ သုံးတုံး နဲ့ ပြန်တွက် ရင် ဒေါ်လာ $ 520 အရူံးပြနေပါပြီ။
4) အတိုးနှုန်း နဲ့ တွက်ရင် 1.25 အတိုး နဲ့တွက်ရင် သိန်း 210 တလ ပြည့်တဲ့ အချိန်မှာ ရမဲ့ တိုးရင်းပေါင်း 21262500 ရမှာပါ။
အတိုးနှုန်း အခြေခံပြီး အမြတ်ပြန်တွက်ကြည့်ကြစို့......
1) ရွှေ အခြေခံတဲ့သူက 2637500 ကျပ်မြတ်ပါတယ်။
2) ကျပ်ငွေ အခြေခံတဲ့သူက 1237500 ကျပ်မြတ်ပါတယ်။
3) ဒေါ်လာ အခြေခံ တဲ့သူက 1487500 ကျပ်မြတ်ပါတယ်။
ဒီ အပင်မှာ ရွှေ ဝင်ကစားသူ သုံးဦး လုံး အတိုးပေးစား သူနဲ့ စာရင် ok ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့များ ရွှေဈေး ငွေလွှဲ နှုန်း ဂျွမ်းပြန်ကျ လာရင် အတိုးပေးစား တဲ့သူက ရီနေမှာပါ။
ဆိုကြပါစို့ ရွှေဈေး 670000 နဲ့ ဒေါ်လာဈေး 1150 ဖြစ်ခဲ့ရင် ရွှေ ဝင်ကစားသူ သုံးဦး စလုံးမြန်မာကျပ်ပြန် လဲရင် အရူံးပေါ်နေပြီ အတိုးပေးစားသူက စင်ပေါ် ရောက်သွားပါတယ်။ မြန်မာ ကျပ် မာလာတဲ့သဘောပါ။
ဒီ အဖြစ် အပျက် ကနေ "သီအိုရမ်" ထုတ်ကြည့်ရင် ရွှေဈေး ငြိမ်တဲ့ အကျ ဘက်ကို ဦးတည်နေရင် မြန်မာငွေ မာလာရင် " အတိုးပေးစား" တာ ကိုက်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့ ရွှေဈေး တက်ရိပ်ပြတဲ့ အချိန် မြန်မာငွေ ပျော့ လာတဲ့ အချိန် မှာ ရွှေ ဝင်ကစားတာ ပိုအကျိုးရှိပါတယ်။
အကျိုးအမြတ် က ဘာမှ မဆိုင်ပါဘူး။ ခုန အဖြစ်အပျက် ကနေပြီး ကျပ်ငွေ နှင့် ဒေါ်လာ အခြေခံတဲ့သူ နှစ်
ယောက်က ရွှေသုံးတုံး ပြန် မဝယ် နိုင်သော်လည်း နီးစပ်ရာ ဘဏ်မှာ ပြန်အပ်ပြီး အတိုးနှုန်း လိူင်း ပြန်စီး ရင် ရွှေဈေး အကျ ကို ကျားချောင်း ပြန်ချောင်းပြီး အဝယ် မှန်ရင် ပြန်မြတ်ကြပါသေးတယ်။ ကမာ့္ဘရွှေဈေး
က တက်လိုက် ကျလိုက် အမြဲဖြစ်နေတာကိုးဗျ။
Good will နဲ့ Intellectual property ဘက်တွေမှာ ရင်းနှီ မြှုပ်နှံ့ လုပ်ကိုင် တာဟာ အင်မတန် ကောင်း ပါ တယ်။ နိုင်ငံတော် အစိုးရ ကလည်း အားပေးမှာပါ။
ကမ္ဘာ မှာ ဒုတိယ အချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့ မစ္စတာ ဝါရင်း ဘတ်ဖတ် (စာလုံးပေါင်း မှားရင် ခွင့်လွှတ်) ကပြော ပါတယ်။ " သူ ဘယ်တော့မှ ရွှေ မှာ ရင်းနှီးမြူတ်နှံ မူ့ မလုပ်ဘူး လယ်မြေမှာ ရင်းနှီး မြိူတ်နှံရင် အမေရိ ကန် လယ်သမားတွေ အလုပ် ရမည်ပေါ့"
မြန်မာ့ရွှေပေါ်မှာ အဓိက အကျိုး သက်ရောက်မူ့ ၂ ချက်ရှိပါတယ်။ ကမ္ဘာရွှေဈေး ရယ် မြန်မာ့ ငွေလဲနှုန်း
ရယ် ရှိပါတယ်။ ကမာ့္ဘရွှေဈေး က မည်သူမှ control မရပါ။ သူဟာသူ float ဖြစ်နေမှာပါ။ inflation က
တော့ ကျွန်တော် တို့ ငွေ မာတာပျော့ တာနဲ့ တိုက်ရိုက် ဆက်နွယ်နေပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဆရာပြောသလို ကုန်ဈေးနှုန်းဖောင်းပွတဲ့ သဘော က မြန်မာငွေပျော့လို့ ပါ။ အရင် က အစိုးရ ဝန်ထမ်း လစာ တိုးတယ် ဆိုရင်ပဲ အပြင်ဈေးကွက် မှာ ကျွန်တော်တို့ ငွေကပျော့လာ တတ် ပါတယ်။
ဒီ factor တစ်ခု က မြန်မာ့ရွှေဈေး ကို မြင့်စေပါ တယ်။ ဆရာ ပြောသလိုပါပဲ အတိုးနှုန်း ထက်စာရင် အဓိက အကျိုး သက်ရောက်မူ့က infation ပါ။
မျော်လင့်ထားတဲ့ ။ မျော်လင့် မထားတဲ့ ကုန်ဈေးနှုန်း ဖောင်းပွမူ့ ကဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ငွေလွှဲနှုန်း ကို ကြိုးချည် ထားနိုင်ပေမဲ့ အများပြည်သူ စားတဲ့ ပြည်တွင်း ဆန်ဈေးနှင့် အခြေခံ စားသောက်ကုန်က မမျှော် လင့်ပဲ ခုန်တက်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ကျွန်တောတို့ အင်ဂျင်နီယာတွေ စက်ပစ္စည်းတွေ နဲ့ လုပ်ငန်း တည် ဘို့လုပ်တဲ့ အခါ ဒီ စက်ပစ္စည်းတွေရဲ့ အရင်းကျေ ကာလ တစ်ခုကို တွက်ရပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာ ဒီ စက်ပစ္စည်းတွေ ရဲ့ တန်ဘိုးလျှောကျ မူ့ဆိုတာကို ထည့်သွင်း တွက်ချက် ရပါ တယ်။ ဆိုကြပါစို့ စက်အသစ် တန်ဘိုး က ၁၀၀၀ ကျပ် ဆိုပါစို့ နောက်နှစ် မှာ ဒီ စက်က ၉၀၀ ကျပ်ပဲ တန်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာ long term investment မှာ အရင်ဆုံး ဦးစားပေး တွက်ရတာ က "အရင်းကျေ ကာလ" တစ်ခု အရင် တွက်ချက် ရပါတယ်။ အဲ့ဒီ ထဲမှာ interest rate က factor အများကြီး ထဲက တစ်ခုပါ။
ဆိုလိုတာ long term investment မှာ အဓိက က ဘယ်တော့ အရင်းကျေမလဲ ဆိုတဲ့ မဟာဗျူဟာ ချမှတ်ပြီး နည်းဗျူဟာ များ ဌာန အလိုက်ပြင်ဆင်ရပါတယ်။
တစ်ကယ်တော့ ရေးရင်သာ လွယ်တာပါ။ ကမာ့္ဘ ရွှေဈေး နှုန်းနဲ့ မြန်မာ ငွေ နဲ့ ဒေါ်လာ ချိတ်ဆက် မူ့ နှုန်း ထား က အင်မတန် ဖမ်းရခက်ပါတယ်။ မရိုသေ စကား ဗျ " အရူးမလင် "လုပ်ရတာမှ လွယ်ပါအုံးမယ်။
ဆရာကြီး မဟုတ်ပါဘူးဗျာ အယူအဆ မှားရင် ခွင့်လွှတ်ကြပါ။
ရတနာ ချစ်သူ မိတ်ဆွေများ အားလုံး နှစ်သစ် မင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။
စာလည်းတော်တော် ရှည်နေလို့ဒီမှာပဲ သိသလောက် ပြန်လည် ရှင်းလင်းတာ ရပ်ပါရစေ။
မိမိ သိထားတာလေးတွေလည်း ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဖြည့်စွက်ပေးဘို့ ဖိတ်ခေါ်အပ် ပါသည်။
ကျေးဇူးပါ ဆရာ WIn Naing Soe
Posted by YKKM at 9:37 PM No comments:
ကျနော်တုို့ ငယ်ငယ်က I.Q ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ တော်တော် ခေတ်စား တာ မှတ်မိသေးတယ်။
I.Q ဆိုတာ Intelligent Quotient ဥာဏ်ရည် ကို တုိုင်းတာတဲ့ အညွှန်းကိန်းပေါ့။
I.Q မြင့် ရင် ဥာဏ်ကောင်းတယ်ပေါ့ .. စာတော်တဲ့သူ။ ကျောင်းမှာ ထူးချွန်တဲ့သူ ဆုို ရင် I.Q မြင့်တယ်လုို့ ပြောကြတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်။ ၁၅ နှစ် လောက်က စပြီး E.Q ဆုို တာ ခေတ်စားလာတယ်။
E.Q ဆိုတာ Emotional Quotient ။ လွယ်လွယ်ပြောရင် မိမိ ရဲ့ စိတ်ခံစားမှု ကို ထိန်း သိမ်းနိုင် တဲ့ စွမ်းရည်။ တနည်း စိတ် ရင့်ကျက်မှု အညွန်းကိန်းပေါ့။
ဘာလုို့လဲ ဆိုတော့ အောင်မြင်တဲ့ သူတွေ ရဲ့I.Q ရော၊ E.Q ရော တုိုင်းကြည့်တဲ့ အခါ I.Q မြင့်တဲ့ သူတွေထက် E.Q မြင့်တဲ့ သူတွေဟာ ဘ၀မှာ ပို အောင်မြင်တာ တွေ့ရတယ်။
ဆုိုလိုတာ က ဘ၀မှာ အောင်မြင်ဖုို့ ဆုိုရင် ဥာဏ်ကောင်းဖို့ ထက် စိတ်ဓါတ် ရင့်ကျက်၊ ခုိုင်မာမှု က ပိုအရေး ကြီးတယ်ဆုိုတဲ့ သဘောပေါ့ ။
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်က Harvard Business Review စာအုပ်ထဲက Daniel Goleman ရေးတဲ့ What makesaLeader? (ဘယ်အရာက ခေါင်းဆောင် ဖြစ်စေသလဲ) ဆုိုတဲ့ ဆောင်းပါး ဖတ်ရတော့ E.Q အကြောင်းရေးထားတာ တော်တော် သဘောကျတယ်။ သူက E.Q ဆိုတာ ဘာလဲလုို့ ပြောရုံတင် မကဘူး။ E.Q မြင့်အောင် ဘယ်လုို လေ့ကျင့်နိုင်တယ် ဆုိုတာ ပြေပြ ထားတာ။ အကျဉ်းချုပ် ကို အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်ပါ...
“အဖွဲ့ အစည်းတွေ မှာ သိပ်တော်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ နဲ့ သာမန် ခေါင်းဆောင်တွေကို ကွဲပြားစေတဲ့ အရာက technical skill အတတ်ပညာ ကျွမ်းကျင်မှု မဟုတ်ပါဘူး..တဲ့။ တကယ်တော့ E.Q လို့ ခေါ်တဲ့မိမိရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင် တဲ့ စွမ်းရည်။
တနည်း စိတ်ရင့်ကျက်မှုပါ..တဲ့ ။ E.Q မြင့်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေ အုပ်ချုပ်တဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခု ဟာ တနှစ် ကို အောင်မြင်မှု ၂၀% ပို တုိုးတက်တာ တွေ့ ရပါတယ်..တဲ့။ E.Q/E.I (Emotional Intelligence) စိတ် ဓါတ် ရင့် ကျက်မှု အညွန်းကိန်းမှာ ပါ တဲ့ ..စွမ်းရည်တွေ ကတော့ ..
(၁) Self-awareness; (မိမိ ကိုယ်ကုို သိတာ) မိမိရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်တွေ။ မိမိ က အပြောအဆုို။ အပြု အမူတွေ က သူတပါး အပေါ် ဘယ်လုို သက်ရောက်မယ်ဆုို တာ ကို သိတာ..
(၂) Self-regulation (မိမိကိုယ် ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်တာ) (စိတ်ဆိုး၊စိတ် ညစ်၊ဒေါသ ထွက် စရာ တွေရှိ ရင်) မိမိ ကိုယ် ကို ထိန်း ချုပ် နုိုင်တာ။ ဒါမှ မဟုတ်.အာရုံပြောင်း နို်င်တာ)
(၃) Motivation: စိတ်ပျော်ရွှင်မှု။ စိတ် တက်ကြွ မှု ကို ထိန်းသိမ်းနိုင် တာ.
(၄) Empathy: သူတပါး ရဲ့ စိတ် ခံစား ချက် ကို နားလည်တာ.
(၅) Social skill: အခြား သူတွေ နဲ့ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်၊ယုံကြည် မှု တည်ဆောက်ပြီး ကိုယ် လုို ချင်တဲ့ ပန်းတုိုင် ကို ဦးဆောင်နုိုင်တာ ပါ ..တဲ့။
ကျနော် တုို့ အားလုံး မှာ..အဲဒီ စွမ်းရည် ၅ ခု က မွေး ကတဲ က ရှိ ကြပါတယ်..တဲ့ ။ အချို့စွမ်းရည် တွေမှာ အားနည်း နေတာ၊ အချို့ စွမ်း ရည် တွေမှာ မြင့်နေတာ တော့ ရှိ တတ် ပါတယ် ..တဲ့။
အဲ ဒီ စွမ်းရည်တွေ ကို ပိုမို အားကောင်းအောင် လေ့ကျင့် လုို့ ရပါတယ်။ လေ့ကျင့်ဖုို့နည်းတွေ ကတော့ ...ဇွဲ ရှိရှိ နဲ့ လ့ကျင့်တာ၊ မိတ်ဆွေတွေ၊ လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ ဆရာတွေဆီက ဝေဖန်၊ အကြံပေးမှုတွေ တောင်းခံတာပါ ပဲ..တဲ့။ “
ကျနော် ကိုယ့်ကိုယ် ကို ဆန်းစစ် တဲ့ နည်း ကတော့ စွမ်းရည် တစ်ခုမှာ အမှတ်ပြည့် က ၁၀၀ ဆုိုရင် ငါ ဘယ်လောက်ရမလဲ စဉ်းစားကြည့်တာ။
နံပါတ် (၁) စွမ်းရည် မှာ အမှတ် ၄၀ လောက်ပဲ ရနုိုင်တယ်ထင်တယ်။
နံပါတ်(၂) ကျတော့ အမှတ် ၃၀ လောက်ပဲရှိမယ်။
အမှတ် (၄) စွမ်းရည် ကတော့ မဆုိုးဘူး။ အမှတ် ၇၀ ထိ ပေးကြည့် ထားတယ်။
အမှတ် (၃) နဲ့ (၅) ကတော့၅၀ ကျော်၊ ၆၀ လောက်ရှိ မလားမသိဘူး။ ကျနော် ကတော့ ကိုယ့်မှာ အားနည်း နေတဲ့ ပထမ ၂ ခု self-awareness နဲ့ self-regulation ကို လေ့ကျင့်နေတယ်။
တော်တော် အကျိုး ရှိတယ်ဗျ။ မိတ်ဆွေ တွေ၊သူငယ်ချင်းတွေလဲ ဘယ်ဟာတွေ လေ့ကျင့် ကြ မလဲ။
ကျနော် E.Q အကြောင်း ရေးတဲ့ စာ ပေါ်မှာ comment တစ်ခုရေးထားတာ ဖတ် ရတယ်။ ဘာရေးထားသလဲ ဆုိုတော့ ..” သဘောကတော့ E.Q ပဲကျင့်လို့ ရတယ်။ I.Q နိမ့်ရင်တော့ ဘာမှလုပ်လို့ မရဘူးပေါ့နော်”..တဲ့ ။ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့comment လေးဗျ ။
သူပြောမှ I.Q အကြောင်း ဆက်တွေး မိလို့ ရေးထားတာပါ... ကျနော်တုို့ က I.Q လုို့ ဆုို ရင် ကျောင်း မှာ စာတော်တာ၊ ကျောင်းသင် ဘာသာရပ် မှာ ထူးချွန်တာ နဲ့ ပဲ ဆက် စပ်တွေးလေ့ ရှိကြတယ်။
I.Q ကောင်းတဲ့ သူလို့ ပြောလုိုက်ရင် ကျနော် စမြင်တဲ့ သူက အုိုင်းစတုိုင်း ပေါ့။ ဥာဏ် ကြီးရှင် ကြီးပေါ့ ။ ဘောလုံး မှာ အင်မတန် ထူးချွန် တဲ့့ပီလီ တို့ ၊ အခု ခေတ် ဆို မက်ဆီ တို့ ။ ဂီတ မှာ ကမ္ဘာကျော်တဲ့မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင် တို့ ၊ မက်ဒေါနား တို့ကို I.Q နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး မတွေးဖြစ်ဘူး။
တကယ်တော့ သူတုို့ လဲ I.Q မြင့် တဲ့ သူတွေပဲ။ ဘာလို့ လဲ ဆုိုတော့Intelligence ဥာဏ်ကောင်း တယ်၊ တနည်း စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းတယ် ဆုို တာ ခွဲ ခြမ်း စိတ် ဖြာနုိုင် တဲ့ ဥာဏ် စွမ်းရည် (Analytical Intelligence) တခု ထဲ မဟုတ်ဘူးတဲ့။
Intelligence ဥာဏ် စွမ်းရည် မှာ အနဲ ဆုံး ၇ မျိုးလောက်တောင် ရှိသတဲ့။ ဆရာ ကို တာ ရေးတဲ့“ဖြန့် ထွက်တွေးခြင်း နဲ့ အခြားစာတန်းများ “ စာအုပ်ထဲ က Howard Gardner ရဲ့ Theory of multiple Intelligence ကို ကိုးကားပြီး ရေးထားတဲ့ စာပုဒ်ကို ဖတ် ကြည့် စေချင်တယ်..
၁။ ပထမ တစ်မျိုးမှာ ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာနိုင်စွမ်းရည် (Analytical Intelligence) ဖြစ်ပြီး စာမေးပွဲများ ၊အိုင်ကျူများနှုင့် တိုင်းတာကြောင်း။
၂။ဒုတိယ တစ်မျိုး မှာ ပုံဖော်နိုင် စွမ်းရည် (Pattern Intelligence) ဖြစ်ပြီး အရာဝထ္တု များ၏ သဏ္ဍန်ကို သိခြင်း၊ ပုံသဏ္ဍန်ကို တီထွင်နိုင်ခြင်းများဖြစ်ကြောင်း။ သချာင်္ပညာရှင်များ၊ ကွန်ပျုတာ ပရိုဂရမ်များ၊ အနုပညာရှင်များ ရှိသော စွမ်းရည်မျိုးဖြစ်ကြောင်း။
သူတို့မှာ ပုံဖော် စွမ်းအင်၌ စွမ်းရည်မြင့်မားလှသော်လည်း သာမန်အတန်းတင် စာမေးပွဲများ၌ ကျနိုင်ကြောင်း၊
၅။ပဉ္စမ တစ်မျိုးမှာ လက်တွေ့စွမ်းရည် (Practical Intelligence) ဖြစ်ပြီး တီဗွီတစ်လုံးကို လမ်းညွှန်လွှာ မပါပဲ ဖြုတ်၍ ပြန်တပ်နိုင်သော စွမ်းရည်တစ်မျိုး ဖြစ်ကြောင်း၊ အစိတ်အပိုင်း နာမည်ကို ခေါ်တတ်ချင်မှ ခေါ်တတ်မှာ ဖြစ်ကြောင်း။
၆။ဆဌမ တစ်မျိုးမှာ ခံစား သိနိုင်စွမ်းရည် (Intrapersonal Intelligence) ဖြစ်ပြီး ငြိမ်ငြိမ် သက်သက် နေတတ်၊မျှဝေခံစားတတ်၍ ကဗျာဆရာများ၊အတိုင်ပင်ခံ (Counsellors) များ ဖြစ်လာတတ်ကြောင်း။
၇။သတ္တမ တစ်မျိုးမှာ သဟာယ စွမ်းရည် (Interpersonal Intelligence) ဖြစ်ပြီး အများနှင့် လုပ်တတ်၊နေတတ်၊ ကိစ္စပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်တတ်သော မန်နေဂျာ များတွင် ရှိရ မည့် စွမ်းရည်မျိုးဖြစ်ကြောင်း။”
ဆရာ ကိုတာ ရဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ပဲ ဆက်ရေးထားတာ က..” ချားလ်စ်ဟန်ဒီ က ၂၁ ရာစု မှာ ကျောင်းသားတွေ ရဲ့ စွမ်းရည် ကို ခွဲခြမ်း နုိုင်တဲ့ စွမ်းရည် (Analytical Intelligence) တစ်ခု ထဲ (စာမေးပွဲ တစ်ခု တည်း) နဲ့ဆန်ကာချ နေတဲ့ ကိစ္စ ကတော့တယ် မနိပ်လှ ဘူး ဟု ပြောပါ သည် “ တဲ့ ။
အဲဒီ စာကနေ ကျနော် ဆက် တွေး ကြည့် မိတယ်။ ...ကိုစိုးသူတို့ ၊ ဖြူဖြူကျော်သိန်း တုို့ ၊ ဆရာမ ဂျူး ၊ဆရာ ဖေမြင့်တို့ ဆရာ ၀န် တွေ ပေမယ့် သူတို့ ရဲ့ Intelligence က အနုပညာ ဖန်တီး တဲ့ ဘက်မှာ အားသန်တော့အဲဒီ ဘက်မှာ မြှုပ်နှံ လုပ်ကြတော့ နုိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင် တွေ။
စာပေ ပညာရှင်တွေ အဖြစ် အောင်မြင် ထူးချွန် နေကြတာနေမှာ ..လို့ ။ ဆရာ မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီကုန်း)၊ ဆရာ အော်ပီကျယ်တုို့ဆုိုရင် အင်ဂျင်နီယာတွေပါပဲ။ သူတို အားသန် တဲ့စွမ်းဆောင် ရည် Intelligence ကို ရှာတွေ့ပြီး အဲဒါကို ဖွံ့ ဖြိုး အောင် လုပ်ခဲ့ ကြလုို့သာ အောင်မြင်ကြတာ..လို့ ။
တကယ်တော့ ကျနော် တို့ မှာ မွေးကတည်း က ကိုယ်အားသန်တဲ့ Intelligence ဥာဏ် စွမ်းဆောင်ရည် လို့ ခေါ်တဲ့” ဇ “လေးတွေ ပါလာပုံရတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ Intelligence က ဘာလဲ ဆုိုတာ မြင်အောင် ကြည့် ပြီး ဖွံ့ ဖြိုး အောင် လေ့ကျင့် နိုင် ရင် ထူးချွန် အောင်မြင် သူတွေ ဖြစ် လာမှာပဲ။
ကျနော့ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း တို့ ရော ..ဥာဏ်စွမ်းရည် (၇) မျိုး ထဲက ကိုယ်ရဲ့တကယ့် စွမ်း ရည် ဟာ ဘယ်ဟာဖြစ် မယ်ထင်သလဲ။ ကိုယ့် ညီ၊ညီမတွေ။ သား၊သမီးတွေမှာလည်း သူတုို့ရဲ့Intelligence က ဘာဖြစ်မယ်ထင် သလဲ။
အဲဒီ Intelligence ကို ဖွံ့ ဖြိုး အောင် လုပ် ပေး ဖုို့က ထူးချွန် အောင် မြင် ဖုို့ အတွက် အရေးကြီးတယ် မဟုတ်လား ဗျာ...
Posted by YKKM at 2:02 AM No comments: